Shina plastika vita amin'ny makarakara Pebbles China sy mpanamboatra | Maloto be
Pebbles plastika milina plastika vita amin'ny plastika misy hazavana namboarina vita amin'ny olona, ​​miorina amin'ny pigolinescentcent pigment ary vovoka synthetic manokana. Rehefa miparitaka ireo loharanom-pahazavana maivana dia ny felana fotoluminescent ao anaty vatosoa Luminous dia faly sy miramirana ao anaty haizina miaraka am-pahatanjahana mahery vaika, avy eo dia ahena tsikelikely indray alina. Ny jiro dia hita tsara indrindra amin'ny faritra maizina, izay tsy misy ny loharanom-pahazavana tsy voajanahary toy ny jiro sy ny fahazavana eo amin'ny volana. Fampisehoana mamirapiratra ao amin'ny maizina sy ny ...
Plastika miloko plastika mandrehitra plastika
Plastika vita amin'ny plastika manjelanjelatra dia vato manjelanjary vita amin'ny olona, ​​miorina amin'ny pigolinescent pigment ary ravina synthetic manokana. Rehefa miparitaka ireo loharanom-pahazavana maivana dia ny felana fotoluminescent ao anaty vatosoa Luminous dia faly sy miramirana ao anaty haizina miaraka am-pahatanjahana mahery vaika, avy eo dia ahena tsikelikely indray alina. Ny jiro dia hita tsara indrindra amin'ny faritra maizina, izay tsy misy ny loharanom-pahazavana tsy voajanahary toy ny jiro sy ny fahazavana eo amin'ny volana.
Toetoetra Mamirapiratra ao amin'ny maizina & miharihary eo amin'ny maizinaLoko manidina isan-karazany: mavo-maitso, manga-maitso ary lanitra-manga sns.Mahatalanjona andro mahafinaritra amin'ny loko fotsy, mavo, maitso, manga, mavokely sns.Fotoam-pandrefesana lava tsy maharitra: mihoatra ny 8 ora
Ho an'ny fanomezana kitapo fampiroboroboana ny fanomezana fonosana: karatra misy lohateny na kitapo FOY na namboarina
Tsy misy poizina, tsy manimba, mampidi-doza amin'ny radio.
Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana eropeana EN71 & REACH
Namidy teboka: endrika tsara tarehy, loko mamirapiratra ary lokon'ny andro
Anarana feno plastika mifototra amin'ny jiro mamirapiratra
Application Haingo Ganden, làlan-dàlam-paritra, haingon-trano fivarotana akanjoRockery, Voninkazo, faritra voaroy,Aquarium, trondro, haingo trondroLafatra amin'ny dobo, fanamboarana rindrina, haingon-trano valin-drihana sns.
Habe malaza Misy habe (habe telo ao amin'ny pebbleshape)
A, YML-Stone-A 2.5 cm (L) * 1.50cm (W) * 1,00cm (H) 3.2g / vatokely
B, YML-Stone-B 4.0cm (L) * 2.80cm (W) x 1.20cm (H) 8.7g / vatokely
C, YML-Vato-C 4.3cm (L) * 3.50cm (W) x 1.00cm (H) 7.2g / vatokely
Lokon'ny andro maizina maitso, mavokely, mavo, manga sns.
Loko glow misy mavo-maitso, volontany maitso, manga-manga
Ny fanandramana luminance DIN67510 Fizarana iray
Ny lanjan'ny fanadinana
fandanjana mcd / m3
Fotoana aorian'izay mihoatra ny 3000mintes
fonosana: Polybag misy baoritra ivelany: 15kg / baoritra: 24 * 30 * 36cm.
Manaraka: Jiro mipiratra Luminescent ho an'ny rafitra mandositra vonjy maika
Mamirapiratra ao amin'ny maizina Pebbles manjelatra
Mamirapiratra mamirapiratra any amin'ny vakana maizina
vatosoa vita amin'ny vovoka midorehitra
Mamirapiratra amin'ny maizim-pito (Gglazed, Parmy P ...
Globed Glady Pebbles